IPhone 6 ee gabar Mareykan ah ayaa si lama filaan ah u qarxay | Wararka IPhone
Shirkadaha u sameeya aaladaha elektarooniga ah macaamiisha inay u dhaafaan iyagoo dhameystiran hababka tayada si looga fogaado fashilka adduunka. Tusaalaha cad ee geedi socodka xun waa Galaxy Note 7 iyo qaraxyadiisa kaladuwan ee batteriga oo sababay khalkhalka aduunka oo dhan. Munaasabaddan waxaan haynaa markhaati gabar 11-jir Mareykan ah oo xaqiijineysa inay iyada tahay iPhone 6 si lama filaan ah ayuu u qarxay oo wuxuu ku guuleystay inuu gubo buste dhimbilo ka soo baxaysa aaladda awgeed. Apple kamay hadlin arintan, laakiin qoysku waxay xaqiijinayaan in kuwa ka socda Cupertino ay horay ula soo xiriireen si ay baaritaan ugu bilaabaan.
IPhone 6 ayaa ku qarxa gobolka California
Ma aha markii ugu horreysay ee aan maqalno in iPhone qarxayo ama wicitaanno ka soo baxayaan nooc ka mid ah moobiilka casriga ah ee Apple. Si kastaba ha noqotee, kiisas badan oo ka mid ah dhacdadan waxay u dhacday sababo la xiriira isticmaalaha, sida adeegsiga xeedho aan rasmi ahayn ama u dirid dayactir meel aan ka caddeynin dhismaha. Si kastaba ha noqotee, kiiska tan Qarax iPhone 6 ah oo ay fulisay gabar 11 jir ah oo reer California ah waxay umuuqataa inaysan wax shuqul ah ku lahayn sababaha ay Apple ku bixiso xaaladahan.
Waan fadhiyey, taleefankayga gacanta ayaan ku hayey, waxaan arkay dhimbiillo meel walba duulaya waxaanan ku tuuray buste. Aniga oo sariirta saran ayaan joogaa telefoonkiina wuxuu ku guulaystay inuu gubo bustahan oo uu sameeyo godadkan. Waxaan u isticmaalaa iPhone 6-ga si aan u daawado fiidiyowyada YouTube-ka mararka qaarna aan u daayo walaalahay iga yar.
Tani waa markhaatiga Kayla Ramos, oo ah gabar 11 jir ah oo leh iphone 6 oo sheeganeysa in terminalkeeda uu si lama filaan ah u qarxay ayna dhimbilo bilaabeen inay ka soo baxaan. Isla markiiba ka dib, wuxuu ku tuuray qalabka sariirta sariirta halkaas oo ay ahayd buste gubatay sababo la xiriira dhimbiillada ka soo baxaya iPhone-ka. Laga soo bilaabo Apple wax hadal ah kama aysan soo saarin qoyska laakiin waxay la xiriireen qoyska u soo bandhig terminal cusub oo bilaaba baaritaan ku saabsan wixii dhacay.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Noticias » Gabar Mareykan ah iphone 6 ayaa si lama filaan ah u qaraxday
Heshiisyada ugufiican maalinta Amazon Prime Day (Luulyo 15)